Daalibaan oo ku dhawaaqi doonta Imaarad Islaami ah iyo dad lagu dilay Garoonka Kabul | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Daalibaan oo ku dhawaaqi doonta Imaarad Islaami ah iyo dad lagu dilay...
Daalibaan oo ku dhawaaqi doonta Imaarad Islaami ah iyo dad lagu dilay Garoonka Kabul
Afhayeenka Ururka Daaliban, Sohayl Shahiin ayaa sheegay in Xukuumadda Cusub ee Afganistan kamidnoqon doonan xubno aan ka tirsanayn Xarakadda Islaamiga ee Daalibaan.
Afhayeenka oo Wareysi Khaas ah siiyey Telefishinka CNN-ka Maraykanka waxa uu ku sheegay in la dhisayo Dowlad Islaami oo loo dhan yahay .
Waxa uu intaasi ku daray in ay Dowladda cusub xubno ka noqon doonaan dad caan ka ah Afganistan, balse waxa uu ka gaabsaday inuu carabaabo magacyada xubnaha caanka ee ka mid noqon doona Dawladda Imaaraadda Islaamka ee Afganistan.
Afhayeenka Ururka Daaliban, Sohayl Shahiin waxa kale oo uu tilmaamay inay cafis u fidinayaan dhamaan Ciiddanka iyo Boliska ee hubka iska dhiga, isla markaana diyaar u ah inay ka hoos shaqeeyaan Dowladda cusub ee ay Daalibaan dhisayso.
Dhinaca kale, ugu yaraan 5 qof oo Afganistaani ah ayaa ku dhintay rasaas ay Ciiddanka Maraykanka ku fureen dad badan oo ku soo xoomay Garoonka Diyaaradaha Xamiid Karasaay ee ku yaalla magalladda Kabul.
Goobjoogayaal la hadlay Wakaalladda Wararka REUTERS waxay sheegeen inay arkeen maydadka 5 qof oo ku dhintay Garoonka.
Ciiddanka Marykanka ee la wareegay Amaanka Garoonka Kabul weli kama aysan hadlin dhacdadaasi, iyadoo dad badan ku sugan yihiin Garoonka oo doonayaa inay dhoofaan.
Diyaaradaha Ganacsiga waa laga xayiray inay Garoonka adeegdsadaan,marka laga reebo kuwa ay Dowladaha u soo kireysteen inay Muwaadiniintooda kala baxaan dalkaasi.
Maqaal horeRW Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u amba-baxay dalka Masar
Maqaal XigaWiil dhalinyaro ah oo ku geeriyooday Badda Warsheekh iyo faah faahin kasoo baxeysa